Momba anay - Huajian Aluminium Group Co. Ltd.
Huajian Aluminium Group dia hita tao amin'ny 2000 tao Linqu City, Faritanin'i Shandong. Ny tanjon'ny ekipa Huajian dia ny ho mpamokatra vokatra aluminium tsara indrindra. Hatramin'izao, ny orinasa dia manana orinasa 5 sy mpiasa 10'000 total. Ny fahaiza-manaon'ny fitrandrahana aliminioma dia 700'000 taonina. Mikasika ny mari-pankasitrahana momba ny kalitao dia manana mari-pankasitrahana ISO9001, ISO14001, Quolicoat ary CE sns isika Ao amin'ny tsenan'ny fanamboarana any Shina, ny Huajian Aluminium no marika malaza sy ekena indrindra.
Ny orinasa dia nahatratra ny rindrin'ny alim-baravarana fananganana avo indrindra. Ny anaran'ny trano dia CITIC Tower, ary misy gorodona 108 sy 528 metatra ny haavony. Ankoatra ny CITIC Tower, Huajian aluminium koa dia nanolotra mombamomba ny aliminioma ho an'ny tranon'ny CCTV, kianja nasionaly China (akany ny vorona, ny goba rano). Huajian aluminium dia nahatratra tetikasa an'arivony tao anatin'ny taona lasa, ary omena voninahitra ho orinasa mpamokatra aliminioma tsara indrindra ny orinasa Metal Metal China.
Mankalaza ny fananganana birao vaovao an'ny Huajia ...
Telefaona: 0536 335 666
Kitapo alimina ho an'ny Windows, Aluminium Sliding Window Design, Aluminium varavarana sy varavarankely, Window amin'ny varavarankely sy varavarana aluminium, Windows Arched Windows, Aluminium Window Frame,